Foto Google na -agbasawanye ọrụ nke ọrụ ya | TeraNews.net
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 10.09.2021
Google na -emeziwanye ọrụ ya oge niile na ihe ọhụrụ metụtara foto Google bụ ihe masịrị ndị ọrụ. Ichekwa gigabytes nke foto n'igwe ojii dị mma, mana adịteghị aka. Site n'afọ ruo n'afọ, ndị nwe ya na -ewepụ foto ndị ahụ ka ha wee gbasaa ebe ahụ ma ọ bụ chefuo ihe ncheta ahụ. Ya mere, atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ - ka ị ghara ịnwụ anwụ foto na -enwu gbaa n'ụdị akwụkwọ, abụrụla ihe na -atọ ụtọ ma na -achọ ya. N'eziokwu, ọrụ a dị naanị na USA na Canada. Mana n'oge na -adịghị anya, ihe ọhụrụ a ga -emetụta mba ndị ọzọ nke ụwa.
Foto Google - bipụta foto wee zigara onye nwe ya
Ọ dịghị mkpa igbu oge na -achọ ụlọ ọrụ iji nyefee foto dị mma na akwụkwọ. Google ga -emere anyị ihe a niile. Ọbụlagodi maka ego, mana ogo ya ga -adị oke elu. A na -enye ndị ọrụ ka ha nweta mbipụta n'ụdị elu ọ bụla - akwụkwọ, kwaaji, akwa, wdg. Gloss ma ọ bụ matte elu, ọgwụgwọ imewe, nha - ị nwere ike họrọ oke ọ bụla. Akụkụ kacha mma bụ na setịpụrụ na -abịa na ọba foto nwere akara dị nro ma ọ bụ nke siri ike.
Ọ nwere ike iju ụfọdụ anya, mana dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ihe karịrị 90% ndị ọrụ akwụsịla (ihe karịrị afọ 20) ịkwụsị ibipụta foto na akwụkwọ. Mgbe ahụ enweghị agụụ. Ọbụnadị ụlọ ọrụ na -ebi akwụkwọ adịghị n'obodo niile - ha dara n'ihi enweghị mkpa. Kedu ihe kpatara na ị gaghị eji ọrụ dị mma nke ga -enyere ndị ọgbọ ọ bụla aka idobe ncheta ha ruo mgbe ebighi ebi.
Onyinye foto Google na -atọ ụtọ nke ukwuu, ọ ga -enwerịrị nkwado n'etiti ndị na -akwado ịse foto echefu echefu. Ọ dị mkpa ịgbaso ntuziaka ụlọ ọrụ gbasara ịdị mma nke onyonyo dijitalụ n'onwe ha (mkpebi). A sị ka e kwuwe, mgbe ị na -ebufe onyonyo na akwụkwọ, a na -achọ ịdị mma kwesịrị ekwesị. Amamịghe nke Google nwere ike idezi foto, mana ọ ka mma mgbe faịlụ mbụ ahụ zutere njirimara niile ekwuru.
Robots Tesla Bot bụ ihe omume ọhụụ nke Elon Musk
DAC Topping E30 - nyocha, nkọwapụta, atụmatụ